Caalamka, 01 May 2016
Axad 1 May 2016
Baqdaad oo Lagu Soo Rogay Xaalad Degdega
Magaalada Baqdaad ayaa lagu soo rogay xaalad deg deg ah, xilli ay qaybo ka mida waddooyinka magaalada buux dhaafiyeen mudaharaadayaal, waxaana xaruntii baarlamaanka ka cararay qaar ka mida sharci-dejiyayaasha iyada oo Milateriguna uu ku sugan yahay feejignaan aad u sarraysa.
Ciidamada Iraq Oo Dib U Weeraray Mosul
Ciidamada Iraq ayaa maanta dib usoo cusbooneysiiyey weerarada ay ku hayaan magaalada kooxda Daacish ay ku xooggan yihiin ee Mosul.
Ciidamada dowladda Yemen oo ay taageerayaan ciidamo gaar ah oo Imaaraati ayaa qabsasaday magaalada Mukalla iyo xarunta ugu weyn ee dalkaasi ee laga dhoofiyo saliida, iyagoo ka qabsaday kooxda al-Qaacida ku xiran ee AQAP.
Soomaalida ku dhaqan dalka Norway ayaa walaac ka muujinaya go’aan cusub oo ay dhawaan soo saartay dowladda Norway oo ay sharciyada degenaanshaha dalkaas ku weyn karaan.
Obama oo Booqasho ku Maraya dalka Jarmalka
Madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama ayaa booqasho ku maraya dalka Jarmalka, halkaas oo la filayo inuu kulan kula yeesho Hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayna ka wada hadlaan dhaqaalaha dunida, Argagixisada, iyo qodobo kale.
Wasiirkii Biyaha Sucuudiga oo la Casilay
Tallaabadan ayaa timi wax ka yar lix bilood markii xukuumaddu ay joojisay gebi ahaan kabkii ay ku bixin jirtay biyaha, korontada iyo adeegyada kale ee la mid ah.
Israel waxa ay maanta ku dhawaaqday inay xireyso dhammaan goobaha laga soo galo ee u dhaxeeya Israel iyo deegaanada la qabsaday ee Daanta Galbeed iyo Marinka Gaza
VOA oo Waraysatay Madaxweyne Xasan
Idaacadda VOA ayaa waraysi la yeelatay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan magaalada Washington DC.
Wiil Soomaali Ah Oo Lagu Dilay Australia
Aabbaha wiilkan dhalay oo lagu magcaabo Mukhtaar Maxamuud Xuseen ayaa VOA u sheegay in wiilkiisa loo malaynayo inay dileen koox budhcad ah oo doonayey inay lacag ka dhacaan.
Israel: Nin Lagu Helay Dilka Wiil Falastiini Ah
Maxkamad Israeli ah ayaa maanta dambi ku heshay ninkii hogaamiyey dilkii aargudashada ahaa iyo gubitaanka wiil yar oo Falastiini ahaa ee sanaddii 2014,.